Ilaah aan loo yeedhin Eebe | Apg29
Eebana ma aha Ilaaha reer Kitaabka Quduuska ah ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in caqiidada Muslimiinta.
Wayna qiran markaa in Eebe Ilaah kale kaliya oo aan ahayn Ilaah kitaabiga ah. Laakiin casriga ah tarjumaadaha Swedish waxaa ku margado marka Eebe tarjumayaa "Ilaah".
Su'aashani, sidoo kale waxaan ku siin jawaab gaaban page weydiinta .
Waxaad sheegay in video ah in Eebe iyo Saddexmidnimada Christian Ilaahiinna ahu waa Ilaah la mid ah. Sidee u noqon kartaa marka ay labada Islaamka iyo Kiristaanka ayaa ku salaysan in Yuhuudda iyo nebiyada oo dhan Yuhuudda ku jira Quraanka Muslim ah?
Kitaabka Quduuska ah aan loo yeedhin Ilaah Eebe. Magaciisa YHWH - Rabbiga. Magaca Tani waxay sidoo kale waa Ciise.
Romans 10: 9. Waayo, haddaad afka ka qiratid in Ciise yahay Rabbiga iyo aad qalbiga ka rumaysatid in Ilaah isaga ka sara kiciyey kuwii dhintay, waad badbaadi doontaa.
Shallaytadaydee Eebe iyo YHWH ahaan isku Ilaah, hubaal Ciise u yeedhay Eebe.
Eebana ma aha Ilaaha reer Kitaabka Quduuska ah ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in caqiidada Muslimiinta:
"Ma jiro wax kale oo Ilaah ka badan Eebe iyo Muxammad waa Rasuulkii Eebe ."
In Carabi waa "Ilaah" iyo "Allah". Waxaa sidaas waa erayo kala duwan, kuwaas oo shaaca ka qaaday in Ilaah macnaheedu ma aha Ilaah. Wayna qiran markaa in Eebe Ilaah kale kaliya oo aan ahayn Ilaah kitaabiga ah. Laakiin casriga ah tarjumaadaha Swedish waxaa ku margado marka Eebe tarjumayaa "Ilaah". Malaha maxaa yeelay, waxaannu ku West la wareersan doonaa fikirka in ay dhacdo Christian Ilaaha.
Laakiin "Allah" waa magac ku habboon in macnihiisu yahay "ilaaha weyn", laakiin muddada waa in aan fahmay in ay ka dhigan tahay, Ilaah kitaabiga ah noqon. Waxaa jiray 300 Sanamyada ee Mecca. Kuwaas oo kala ah, ilaah ugu weyn ee Muhammad Eebe gaaray baxay oo wuxuu ka dhigay in mid ka mid ah Ilaah.
Ilaaha reer Kitaabka Quduuska ah wuxuu leeyahay wiil, kaas oo sheegay in dhowr jeer in labada Axdiga Hore iyo Axdiga Cusub.
Word 30: 4aad Yaa samada kor iyo mar kale u soo dhaadhacday? Yaa dabaysha ee gacmihiisu sameeyaan? Yaa ku xidhay biyaha dharkiisa ah? Yaa aasaasay xadka dhulka oo dhan? Waa maxay magiciisa, iyo waxa uu ina - waxaad ogaan koorsada?
At 11: 1-dii Markii Israa'iil ilmo yar ahaa waan jeclaan jiray, oo Masar ka soo baxay ayaan wiilkayga yeedhay.
2 Samuel 7: 14.Jag u ahaan doonaa aabbihiis, oo wuxuu ahaan doonaa wiilkaygii. Oo hadduu dembi galona, ​​waxaan ku edbin doonaa usha, si ay dadku inta badan, iyo garaacidda binu-aadmiga la.
Sabuurka 2: 7, anigu waxaan naadinayaa go'aanka Rabbiga. Oo wuxuu igu yidhi: "Adigu waxaad tahay Wiilkayga, maanta ayaan ku dhalay."
SABUURRADII 89: 27 Oo wuxuu igu qaylin doonaa, 'Waxaad tahay aabbahay, Ilaahay oo badbaadadayda "!
Mark 1: 1. Tani waa bilowgii Ciise Masiix, Wiilka Ilaah, Injiil.
Luke 1:35. Markii malaggii jawaabay oo ku yidhi iyada, Ruuxa Quduuska ah ayaa kugu soo degi doona, oo ugu sarreeya ayaa hoosiis kuu noqon doona, oo sidaas daraaddeed, sidoo kale Quduuska ah oo u dhalan doona oo idinka mid ah u yeedhay Wiilka Ilaah.
Efesos 4:13. ilaa aynu wada gaadhno midnimada rumaysadka iyo aqoonta Wiilka Ilaah, si nin kaamil ah, iyo in heerka of maturity in iska leh buuxnaanta Masiixa.
Cibraaniyada 4:14. Tan iyo markii aynu lihin wadaad sare oo weyn, kan samooyinka sii dhex maray, Ciise oo ah Wiilka Ilaah, aynu xajinno iimaanka aynu qiranno.
Ciise qudhiisa u sheegay in uu ina Ilaah
John 3:18. Ku alla kii isaga rumaystaa ma xukumna, laakiinse kii aan isaga rumaysan taribuunka hore ayaa loo xukumay, maxaa yeelay, wuxuusan rumaysan in keliya oo dhashay Wiilka Ilaah.
John 5:25. Runtii, runtii, waxaan idinku leeyahay, Waxaa jira yimaado waqti, iyo haatan halkan, markii kuwii dhintay maqli doonaan codkayga Ilaah yahay, oo kuwa maqlaana way noolaan doonaan.
John 9:35. Ciise ayaa maqlay inay dibadda ku tuureen, oo markuu isagii ka helay, wuxuu ku yidhi, Ma rumaysan tahay Wiilka Ilaah?
John 10:36. si aad ku leedihiin kii Aabbuhu quduus ka dhigay, oo dunida u soo diray, Waad caytantaa, waayo, waxaan idhi, Waxaan ahay Wiilka Ilaah.
Ilaah (Aabbaha) ayaa sheegay in uu leeyahay wiil
Mat 3:17. Oo bal eeg, oo cod baa samooyinka ka lahaa, Kanu waa Wiilkayga aan jeclahay. In isaga waan leeyihiin wanaagsan a.
Mat 17: 5-tii Intuu weli hadlayay, bal eeg, waxaa la hadhaysay by kuwa daruur ah iska Ifto Yuuna, oo bal eeg, cod baa daruurtii ka soo baxay oo yidhi, Kanu waa Wiilkayga aan jeclahay, oo aan ku ahay wanaagsan. Maqla isaga.
"Waxay dhihi (Kiristanka iyo Yuhuudda):. Ilaah wuxuu leeyahay wiil ka nasahan wuxuuna (wax kasta ka sarreeya waxay la wadaajin agtiisaana) No, isagaana iska leh xukunka waxa Samooyinka iyo Dhulka ku sugan oo dhan, iyo is dhiibin leh. addeecidda (Gaalowdo) isaga. " (Quraanka 2: 116)
"Ma aha doonista (uu Weynaha) Ilaah oo uu heli lahaa wiil ka nasahan (oo noqon, wuuna ka sarreeya waxay la wadaajin la isaga sarraysiin) Marka wax doono inuu xukumo amarna, wuxuu leeyahay oo kaliya in ay.." Noqo! "- waana . " (Quraanka 19:35)
Waxaa sidaas noqon lahaa laba ilaahyo kala duwan. Mid ka mid ah iyaga ka mid ah waxay leedahay wiil, kuwa kale oo aan.
Ilaah wuxuu soo diray Wiilkiisa dunida ugu soo galay
Kitaabku waxa uu leeyahay in Ilaah wiilkiisa keliya oo dhashay diray inaan dunida badbaadiyo oo u heshiisiiyo isu.
Yooxanaa 3:16. Waayo, Ilaah dunida jacayl u qabay ayuu siiyey Wiilkiisa keliya oo dhashay, in ku alla kii isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah.
2 Korintos 5:19. Waayo, Ilaah Masiix dunida heshiiyey qudhiisa iyo ma Dambigooda Dartiis tiriyo, oo wuxuu noo dhiibay hadalka heshiisnimada.
Quraanka Eebe uma iman inaan dunida u soo diray wiil maxaa yeelay, isagu wiil ma leh.
Sidaa darteed, ma jirto badbaadada Eebe waxaa jira ee YHWH - Rabbigu - sababtoo ah ma jirto reconciler Quraanka.
Waxaa intaa dheer, Quraanka Ciise kale oo badan waxa Kitaabka Quduuska ah wuxuu qeexayaa oo ku markhaati fura. Kuwaas oo gebi ahaanba yihiin laba qof oo kala duwan. "Ciise" Quraanka kariimka ah gebi ahaanba uu ka hor waxa Kitaabka Quduuska ah ayaa sheegay in ku saabsan Ciise.
Sida laga soo xigtay Kitaabka Quduuska ah ma aha Muhammad Rasuulkii Ilaah, ama Rasuullo, maxaa yeelay, Ciise sara kacay ayaa sheegay in uu yahay bilowgii iyo dhammaadka. Alfa iyo Oomeega waa xarfaha hore iyo alifbeetada Greek. In si kale loo dhigo, Ciise waa kan horreeyay, waana kan dambayn. mid ka mid No yimaado Ciise ka hor oo ninna Ciise ka daba iman doona. Muhammad yimid boqolaal sano Ciise ka dib. Sidaasay u xaqiijinayaa in Muxammad waa nebi been ah.